Egwuregwu kart kacha mma 5 maka gam akporo | Androidsis
Egwuregwu ịgba bọọlụ bụ ihe a ma ama mgbe niile, ebe Mario Kart bụ otu n'ime ntụnyere kachasị mkpa na ụdị a. Ha bụkwa otu n'ime ihe na -atọ ụtọ ma na -egwuri egwu na nyiwe dị iche iche, ọ bụghị naanị na ekwentị gam akporo, kamakwa na consoles desktọọpụ, kọmputa na iPhone. Ọ bụ ya mere anyị ji achịkọta ụfọdụ egwuregwu kacha mma kart ị nwere ike ibudata taa, mana na gam akporo.
Ebe ị ga -ahụ ndepụta nke egwuregwu karting kacha mma maka gam akporo. Ha niile nweere onwe ha, n'otu oge ahụ, otu n'ime ihe kacha ebudatara na ama ama na Storelọ Ahịa Google Play.
N'okpuru ị ga -ahụ ọtụtụ egwuregwu kart kacha mma maka ekwentị gam akporo. Ọ dị mma ịmara, dịka anyị na -eme mgbe niile, na ndị niile ị ga-ahụ na nke a chịkọtara post bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile.
2 Boom Karts ọtụtụ mmadụ na -agba ọsọ
5 Starlit Na Wheel: Super Kart
E nweghị ọzọ. Ị ga -ebido, ee ma ọ bụ ee, jiri ya Mario Kart Tour, otu n'ime egwuregwu go-kart kacha aga nke ọma na Storelọ Ahịa Play yana otu n'ime aha Nintendo kacha enweta nke ọma maka ekwentị mkpanaka n'ime akụkọ ihe mere eme ya, yana ihe karịrị nde 90 nbudata n'izu mbụ mmalite naanị ya.
Egwuregwu a nwere eserese 3D na eserese kwesịrị ekwesị maka egwuregwu Mario ọ bụla, njirimara kacha nwee ọmarịcha na ihe ịga nke ọma site na Nintendo Nintendo. Ọsọ ndị ahụ na -atọ ụtọ ma enwere nnukwu mpi n'ime ha. E nwekwara ike iji otu aka kpọọ ya ma ọ bụ kwụ n'ahịrị; ị họrọ!
N'ebe a, ọ bụghị naanị na ị ga -adị ngwa, kamakwa ọ bụ aghụghọ na ọkaibe. Ị ga -enwerịrị ikike dị iche iche na blọgụ dị omimi dị n'akụkụ egwu ahụ. Were ha ma jiri ihe niile ị hụrụ n'ime ha gbuo oge ndị na -emegide gị, rute ebe mbụ wee, n'ụzọ dị otu a, bụrụ onye mbụ na onye mmeri nke Mario Kart Tour. N'otu oge ahụ, ọ bụghị naanị na ị ga -enwe ike iji bọọlụ egwu egwu (nke na -adịkarị asọmpi; ekwela ka a ghọgbuo gị), kamakwa ezigbo ndị egwuregwu si n'akụkụ ụwa niile ekele maka ọtụtụ mmadụ.
Maka agbamume na ịchọ imeziwanye na egwuregwu, enwere ọkwa ụwa nke na -atụ naanị ndị kacha mma n'ubu; Zụọ, mee ihe, merie, bụrụ onye nke mbụ na tebụl ma gosi onye ọ bụla bụ eze pints na agbụrụ na -enweghị mgbagha. Ka mkpali gị mị mkpụrụ na njedebe nke ebumnuche.
Ị nwere ọtụtụ ndapụta ga -akpọga gị n'akụkụ ụwa dị iche iche. Enwekwara ọtụtụ agwa, dị ka Bowser na -atụ egwu na Princess Peach, n'etiti ndị ọzọ. Ị nwekwara ike ịnakọta baajị, mkpụrụedemede, ụgbọ ala na ihe ndị ọzọ.
Boom Karts ọtụtụ mmadụ na -agba ọsọ
N'ịga n'ihu egwuregwu kart nke abụọ na ndepụta a, anyị nwere Boom Karts ọtụtụ mmadụ na -agba ọsọ, egwuregwu ịgba ọsọ nke, dị ka aha ya pụtara, nwere ọnọdụ ọtụtụ mmadụ, nke gị na ndị egwuregwu ndị ọzọ si gburugburu ụwa ga -egwu n'ịntanetị ma na -asọrịta mpi ka ị bụrụ onye kachasị mma na onye mbụ rutere n'isi njedebe.
N'ebe a, eserese 3D abụghị ihe pụtara ìhè site na ọnụnọ ha, ma ọ bụrụdị ike na ikike nke ahụ ga -akwalite gị n'ihu ndị asọmpi ndị ọzọ, ebe enwere ọtụtụ aghụghọ iji rụọ ọrụ n'ọsọ, mana kpachara anya, ka ị nwee ike irite uru na ha, ndị ọzọ. Ị nwere nnukwu ngwa agha nke bọmbụ, ose chili na ọtụtụ ngwa ọgụ ndị ọzọ na -atọ ụtọ na nke pụrụ iche.
Akwụkwọ Karts Multiplayes Racing nwekwara atụmatụ karts dị iche iche ịhọrọ site na mkpụrụedemede na avatars nwere ike ịhazi ya nke ọma Nke ị nwere ike kwadebe ha okpu, uwe, okpu agha na ngwa ndị ọzọ iji mee ka ha yie ka ịchọrọ. Ma ọ bụghị ya, karts na -abịa na njiri mara pụrụ iche, stats na njirimara na -eme ka ha dị mma na mpaghara dị iche iche, yabụ nwalee ma hụ nke dabara gị mma n'ịgba ọsọ.
N'inwe ihe karịrị nde iri nakọtara na nbudata na Storelọ Ahịa Play, KartRider Rush + Ọ bụ aha ọzọ kart kachasị egwu. Ọ bụghịkwa obere, n'ihi na ọ nwere agbụrụ na -atọ ụtọ nke ị ga -abụrịrị aka ochie, n'ihi na ndị asọmpi agaghị eme ka ọ dịrị gị mfe. N'otu oge ahụ, eserese 3D na ụda ụda ga -eme ka ị mikpuo na asọmpi.
N'ebe a, ị nwere ike ịnakọta ma kwalite karts ndị ị mepere ka ị na -aga n'ihu site na ụwa nke KartRider Rush +. Ị nwekwara ụdị akụkọ na ọtụtụ ụdịdị, dị ka nnwale oge na bọọdụ isi. Ihe ọzọ bụ na ị nwekwara ike hazie mkpụrụedemede gị dịka ịchọrọ na enwere ihe karịrị egwu pụrụ iche iri anọ na anọ ịkwọ.
SuperTuxKart bụ nnukwu egwuregwu kart ọzọ nke ịgba ọsọ na -agba ara, yana njikwa isi maka ịkwọ ụgbọ ala na ọdịdị egwu dị mma. Ọ bụ ezie na eserese 3D na -emegharị emegharị, SuperTuxKart na -echigharị n'echiche efu, yabụ na ọ dịtụ iche na egwuregwu karting ndị ọzọ n'akụkụ a.
Malite ịgba ọsọ ugbu a, ma ọ bụ n'okpuru mmiri, n'ugbo ime obodo, n'oké ọhịa, ma ọ bụ ọbụna na mbara igwe. Monotony dị na egwu bụ ihe a na -ahụghị na egwuregwu ịgba ọsọ a. E nwekwara ụdịdị dị iche iche, dị ka ntozu na asọmpi, na ọnọdụ nnwale oge.
Developer: Ndị otu SuperTuxKart Development
Starlit Na Wheel: Super Kart
Iji mechaa, anyị nwere Starlit Na Wheel: Super Kart, aha ọzọ kart kacha mma maka gam akporo nke nwere mmetụ aka mara mma nwere karts dị ịtụnanya, ihe odide, mmetụta na egwu. Enwere ọkwa 128 na ụwa 8 dị iche iche ebe a ka nkụda mmụọ adịghị mgbe ọ bụla. Ọ na -enyekwa gị ohere ịmepụta egwu na ọsọ megide ndị isi dị ike.
Developer: Egwuregwu Rockhead
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Egwuregwu karting kacha mma 5 maka gam akporo